Filoha Rajaonarimampianina : “FITARATRY NY FAMPANDROSOANA I NOSY-BE” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Rajaonarimampianina : “FITARATRY NY FAMPANDROSOANA I NOSY-BE”
Tontosa ny zoma, 20 Janoary teo, tany Nosy-Be (Hell-ville) ny fivorian’ny talen’ny banky iraisam-pirenena aty amin’ny firenena Afrikanina. Tonga nanatrika izany fivoriana izany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, niresaka ny fanambin’i Madagasikara izay efa ao anatin’ny fiarenana tanteraka amin’izao fotoana izao, raha nilaza manokana ireo zavatra vita tany Nosy-Be, izay fitaratra ny fanamby be dia be vita eto amin’ny firenena. Nasongadin’ny Filoha ihany koa nandritra ny tafatafa tamin’ireo tompon’andraikitra ambony, toa ny filoha lefitra, Mokhtar Diop fa mpiara-miasa stratejika mandray ny andraikitra ho an’i Madagasikara ny banky iraisam-pirenena. « Lehibe ny fanamby ho an’ny firenena izay manana tany midadasika mamokatra nefa tsy maharaka ny famatsiana ara-tsakafo ho an’ ny mponiny ao aminy toa ny Madagasikara. Fanambinay ihany koa ny famatsiana angovo, fametrahana fotodrafitrasa ary ny fahabetsahan’ny mponina tanora », hoy ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Mahakasika ny Nosy-Be manokana, nanambara ny Filoha fa lasa tanàna andrana eo amin’ny sehatra fampandrosoana, fizahantany, fametrahana fotodrafitrasan’ny seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo, toa ny any Ankify izay namboarina tamin’ny famatsiam-bola avy tamin’ny Banky iraisam-pirenena. Ny tanànan’i Nosy-Be izay tena manana ny mampiavaka azy eo amin’ny sehatra ny fizahantany, toa ny Nosy Iranja, izay tafiditra ao anatin’ny toerana 10 tsara indrindra manerantany. Eo amin’ny sehatry ny fandriam-pahalemana indray, voalohany eo amin’ny tanàna manana tambazotran’ ny « vidéo surveillance » eto amin’ny firenena malagasy i Nosy-be, ary izay no nahatonga azy ho fitaratry ny fampandrosoana sy ny ady amin’ny fahantrana eto Madagasikara.
Niresaka momba ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny fiantraikan’izany eto amintsika izay arahin’ny tranga « El nino » sy « La nina », ihany koa ny Filoha. « Amin’izao fotoana izao, efa tafiditra ao anatin’ny paikady rehetra ny fampandrosoana, tetikasanay ny fiovaovan’ny toetr’andro.» Fanamby ihany koa, ny fahabetsahan’ny mponina tanora, izay sady tombondahiny no olana. Satria ilana asa mafy eo amin’ny sehatra ny sakafo, fahasalamana, fanabeazana ary asa. Mahakasika ity farany, nanambara manokana ny olana eo amin’ny famatsiana angovo, ny Filoha Rajaonarimampianina, satria ankoatra ny masoandro sy rano, mbola mila omen-danja ihany koa ny mponina eny ifotony manoloana ny tanin’izy ireo hanaovana ny fitrandrahana, ity sehatra ity izay marihina fa anisan’ny miteraka asa eny anivon’ny fiarahamonina.
Ary farany dia niresaka momba ny fanamby mifandraika amin’ny fitantanana, ny fametrahana fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ny Zes (Zones économique specials). Notsiahivina koa fa hisy ny drafitra hapetraka entina hanatsarana ny fampidiram-bola sy ny fakana vola, izay miankina betsaka amin’ny fahamarinan-toerana ara-pôlitika sy ara-toekarena eto amin’ny firenena. “Ho an’i Madagasikara, ny fambolena dia sehatra iray manan-danja, satria mahenika ny fotodrafitrasa, ny ambioka ary ny famatsiam-bola. Mahakasika ity sehatra iray ity, faly izahay misitraka ny fanoloran-tenan’ny sehatra tsy miankina, izay nampiseho fahavonana hanampy anay nandritra ny fivorian’ny mpamatsy vola sy mpampiasa vola. Ny sehatra tsy miankina izay fototra iorenan’ny fampandrosoana. Maniry izahay ny mba handraisan’ny SFI (Société financière international) andraikitra kokoa eo amin’ny fanohanana ny sehatra tsy miankina Malagasy”, hoy ny Filoha Rajaonarimampianina Hery, namarana ny teniny.